Sida loo qoro qoraalkaaga | Tilmaamaha Guusha Warqadaha
Qoritaanka warqad farsamo - tilmaamaha warqad farsamo oo wanaagsan
Tilmaamaha ugu fiican ee abuurista warqad farsamo:
Dugsiga sare maanta waa wax iska caadi ah in ardaydu ay qoraan cashar maadooyin kala duwan ah. Abuuritaanka shaqada noocan ahi waxay ku lug leedahay yoolal kala duwan. Dhinaca kale, ardaygu wuxuu ku horumarin karaa fasalkiisa guud maadada ku habboon iyadoo loo marayo shaqo farsamo oo wanaagsan. Dhinaca kale, qorista warqad erey-bixin ahi waxay u adeegtaa sidii u diyaargarowga barashada. Macno malahan maadada la doorto. Sababtoo ah dhammaan barnaamijyada shahaadada waa wax caadi ah maanta in la qoro waraaqo xilliyeed, waraaqo aqoon-isweydaarsi ama shaqo mashruuc inta lagu jiro koorsada iyada oo caddeyn u ah in ardaygu uu bartay qorista waraaqaha sayniska ee heer sare. Sharafta taajka ee shahaado waa shahaadada koowaad ee jaamacadda ama mastarka. Shahaadada mastarka ee imtixaanka u dhigma sidoo kale badanaa waxaa u baahan shaqo bixiyaasha mustaqbalka iyada oo ah shuruud aasaasi u ah wareysiga.
Shaqada farsamada wanaagsan ee heerka sare sidoo kale waa shuruud u ah gelitaanka imtixaanka Abitur. Daraasad lagu qiimeeyay eber si toos ah ayaa looga reebay gelitaanka baaritaanka Abitur. Ardayda haddaba waxay la kulmaan caqabad weyn oo ah inay si adag ula macaamilaan mowduuc aysan daruuri ugu heli karin xiriirkooda lagama maarmaanka ah. Diyaargarowga nidaamsan iyo madaxbannaan ee daraasadda takhasuska leh waa inuu buuxiyaa shuruudaha rasmiga ah ee la midka ah daraasadda tacliinta sare ee jaamacadda. Sharaxaadku maahan inuu noqdo mid faahfaahsan. Si kastaba ha noqotee, si rasmi ah shaqada ayaa loo qaabeeyey sida shaqo kasta oo saynis ah. Ie xaashida daboolka, jadwalka waxyaabaha ku jira, laga yaabee liistada soo gaabin, haddii tirooyin ama miisas la adeegsado, kuwan sidoo kale si gooni ah ayaa loo taxay, qoraalka dhabta ah iyo buug-gacmeedka. Qoraalka waxaa loo qaybiyaa qodobada hordhaca, qeexida dhibaatada, ujeedada hadafka, qaybta aragtida, falanqaynta qaybta hada jirta, istaraatiijiyada falanqaynta, qaybta wax ku oolka ah, waxa loogu yeero gobolka bartilmaameedka, soo koobid, gabagabo.
Yuu qorayaa qoraalka?
Ma aha sharaf darro in looga faa’iideysto kaalmada dibadda ee diyaarinta shaqo qoraal ah. Adeegsiga dib-u-akhrinta, dib-u-akhrinta ama ka caawinta helitaanka mawduuc waa kaalmooyin sharciyeed oo aan saameyn taban ku lahayn fasalka guud. Qoraalka Ghostwriting waxaa loogu talagalay inuu u hoggaansamo shuruudaha rasmiga ah iyo kuwa nidaamsan ee ku jira shaqo kasta oo cilmi ah. Xitaa qoraal-gacmeedka shaqo takhasus leh oo dhammaystiran ayaa suurtagal ah maxaa yeelay qoraalka la abuuray wuxuu u yahay gargaar jiheyn ardayga si uu ugu abuuro shaqada ereyadiisa.
Sida shaqo kasta oo kale, arday kasta waa inuu soo gudbiyaa oo uu saxeexaa waxa loogu yeero cadeynta sharafta ama xitaa dhaarta taas oo lagu xaqiijinayo in shaqada hadda jirta loo qoray si madax banaan iyada oo aan la helin caawimaad dibadeed iyo in aan la isticmaalin ilo kale oo aan ahayn kuwa ku qeexan buug-gacmeedka. Xeerarka tixraaca gaar ahaan waxay bixiyaan dhibaatooyin badan, taas oo inta badan keenta warqad farsamo oo aan u hogaansamin sharciyada rasmiga ah laguna tilmaamo inay ku guuldareysatay. Sababtaas awgeed keliya, adeegsiga shirkad qormooyin ku qoreysa sida kuweena oo kale waa maalgashi macquul ah oo qiimo leh mustaqbalka.
Qorista sheyga oo hordhac u ah koorsada
Iyada oo la adeegsanayo cashar qoraal ah oo u dhigma shuruudaha dugsiga naxwaha xagga nuxurka iyo foomka, ardaygu wuxuu caddeyn karaa inuu diyaar u yahay tallaabada xigta - ka dib markuu ka gudbo Abitur-ka. Koorsada jaamacaddu waxay u baahan tahay bilowga in ardaygu awood u leeyahay inuu qoro warqad cilmiyaysan waqti cayiman. Marka lagu daro cadaadiska kama dambaysta ah ee cashar bixinta lagu bixinayo, waxaa inta badan jira mowduucyo dheeri ah oo laga shaqeynayo oo aysan ardaydu garanaynin waxay sameeyaan. Sababtaas awgeed, arday badan ayaa sidoo kale adeegsada adeegsi qoraal ah oo ka caawiya iyaga hirgelinta mowduuca. Qorayaasha u shaqeeya wakaaladaha qormooyinka ghostwriters waa aqoonyahanno takhasus gaar ah ku leh shaqadooda waxayna leeyihiin ugu yaraan shahaadada mastarka oo ah shahaado tacliimeed, qaarkoodna sidoo kale waxay heleen dhakhtar ama baxnaanis. Ku-adkaysiga tacliimeed ee qorayaasheennu waxay dammaanad ka qaadayaan ardayda dugsiga iyo jaamacadda heerka ugu sarreeya ee aqoonta takhasuska leh. Haddii adiga arday ahaan ama ka qalin jabisay dugsiga sare aad jeclaan lahayd inaad ku iftiimiso qoraal qaas ah oo gaar ah, waa inaadan ka labalabeyn daqiiqad oo aad ka faa'iideysato adeegyadayada. Waxaan sidoo kale kugula socon doonaa inta aad baraneyso oo dhan.